सुकुम्बासीका नाममा, हुकुमबासीको रजाँई : वडा अध्यक्ष नै उठाउँछन् मासिक ३० हजार भाडा - हिमाल दर्पण
सुकुम्बासीका नाममा, हुकुमबासीको रजाँई : वडा अध्यक्ष नै उठाउँछन् मासिक ३० हजार भाडा
सहर भन्नेबित्तिकै सामान्यतः अग्ला, सफा र चिटिक्क घर, चिल्ला र फराकिला सडक । राति पनि दिउँसोजस्तै उज्यालो, झिलीमिली बत्ती । सुविधासम्पन्न बसाइ । अनि सफा र बास्नादार लुगा लगाउने मानिस भन्ने चित्र आउँछ मनमा । तर, सहरको यथार्थ योभन्दा भिन्न पनि हुन्छ । नपत्याए काठमाडौं सहर हेर्नुस् ।
जहाँ जस्तापाताले बेरिएका, बाँसका कप्टेराले बारिएका साँघुरा घर छन् । पानी होइन, घामसमेत छेक्न नसक्ने छानो भएका, बोराले बारेको घर र हिलो बाटो देख्न सकिन्छ । शीत छेक्न नसक्ने, बर्खाको पानीले डुबाउने, भात पकाउनेदेखि सुत्नेसम्म एउटै कोठा भएका घर छन्, सहरमा । स-साना झुपडि बनाएर आफ्नो दैनिकी गुजार्ने समुह पनि छन् यो काठमाडौं ।
यो सहरले यस्ता मान्छेलाई ‘सुकुमबासी’ भन्छ । भलै शीत छेक्न नसक्ने, बर्खाको पानीले डुबाउने बस्ति होस्, सहरका धनाढ्यहरु पनि आफूलाई सुकुमबासी घोषणा गरेर यस्ता ठाउँमा घर बनाएर बसेका छन् । सुकुमबासीको नाममा हुकुमबासीले सरकारी जग्गा कब्जा गरेर घर बनाएको र घर भाडामा लगाएको खबर बेला बेलामा छाइराखेको हुन्छ । आज हामीले उठान गर्न लागेको विषय काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. १५ स्वम्भु स्थित बस्तिको हो । स्यम्भु स्तुपा परिक्रम गर्ने देर्बेपट्टि हामी करीब ४०/५० घर झुपडि बस्ती देख्‍न सक्छौं ।
सो बस्तीलाई वडा कार्यालय देखि काठमाडौं महानगरपालिका र स्यम्भु स्तुपा बिकास समितिले समेत बस्ने अनुमति दिएको छ । तर सोहि वरपर २/४ जना व्यक्तिहरु यस्ता पनि छन् जो बस्तिको दायरा भन्दा बाहिर गएर सरकारले गुम्बा बनाउन दिएको जग्गा कब्जा गरी घर बनाई भाडा उठाएर खाइरहेका छन् । नेपाल सरकारले सो क्षेत्रमा गुम्बा बनाउन दिएको जग्गा साबिकको कित्ता नं. २६५ अन्तर्रगत ६ रोपनी ३ आना रहेको छ । उक्त बस्ति नजिकै नेपाल तामाङ्ग बौद्ध गुम्बा सेवा समाजले गुम्बा बनाउन राखेको करीब १ रोपनी ३ आना जग्गा छ ।
हाल धेरै जसो जग्गा खाली रहेता पनि लगभग ३ आना जति जग्गामा व्यक्तिगत घर बनेको छ । उक्त घर दिल बहादुर वाइवाले बनाएर बिगत १०/१२ वर्ष देखि भाडा उठाएर लिने गरेको खुल्न आएको छ । दिल बहादुर वाइवा, काभ्रे जिल्ला, महाभारत गाँउपालिका वडा नं. ४ बुढाखानीबाट नेपाली काँग्रेस पार्टीबाट निर्वाचित वडा अध्यक्ष समेत हुन् ।
जनप्रतिनिधि आफैं सरकारले गरिब, भुमिहिन र बौद्ध गुम्बा बनाउन दिएको जग्गा कब्जा गर्नु आफैमा लाजमर्दो कुरा हो । वाइवाको उक्त वस्ति भएकै वडा नं. १५, किमडोल नजिकै दुई ठाँउमा जग्गा र ५ तले घर रहेको जानकारी हामीले पाएका छौं । एउटा जग्गा करीब मूल्य २ करोड बराबरको ५ आना, अर्को जग्गा करीब १ करोड मूल्य बराबरको ५ आना साथै फेरि अर्को साढे ३ आनामा बनेको ५ तले घर करीब ३ करोड पर्ने गरी ६ करोड बराबरको सम्पति छ ।
करोडौंको सम्पती भएका वाइवाले बस्तिको घरबाट मासिक ३० हजार भाडा संकलन गर्ने गरेका छन् । कोही कसैले सोधखोज गरेमा, “यो घर आफ्नै हो भनेर भन्‍नु” भाडामा बस्नेलाई वाइवाले यहि सिकाएका छन् । उनले आफ्नो मात्र नभएर समग्र जनप्रतिनिधिको नाक कटाएका छन् । केहि बाहिरका घुसपेठियाले गर्दा सिङ्गो बस्ति नै खतरामा पर्दै गएको छ । काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनारामा सामूहिक र एकल रूपमा वर्षौंदेखि बसोवास गरिरहेका भूमिहीन नागरिकको संख्या अनगिन्ती छ । यकिन संख्या कसैसँग पनि नभएकोले ‘अनगिन्ती’ नै भन्नुपर्ला ।